Sajhasabal.com |दङ्गाली चेली सलिना बिसीको यो नयाँ दशैँको गीत हेरेर, सुनेर सहयोग गरिदिन हुन सबैमा आग्रह छ ।
अस्ताए एक विकासप्रेमी नेता, को हुन् सांसद ओली ?
रोल्पाबाट दाङ आउंदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, ३१ जना घाइते
दाङको एक होटलमा ३४ वर्षीय युवा मृत फेला
अब बजारमा ठेला गुडाउँदै हिड्न नपाइने, गुडाए १० हजार जरिवाना !
दाङमा बालिका बलात्कार गरेको आरोपममा एक युवक पक्राउ
‘दाङ–सुर्खेत सडक निमार्णकार्यले तीव्रता पायो’
धोवाघाटमा मोटर पुग्दा स्थानीयवासी खुशी
वर्षाका कारण दाङमा रु १० करोडको इँटा नोक्सान
दाङमा राजश्व असुलीमा वृद्धि
दाङका १७ विद्यालयले ग्रेडसिट नपाउँदा विद्यार्थी समस्यामा
दाङमा एक हजार तीन सय हेक्टरमा हिउँदे मकै
दाङ्ग - DNG / भिडियो
दङ्गाली चेली सलिना बिसीको यो नयाँ दशैँको गीत हेरेर, सुनेर सहयोग गरिदिन हुन सबैमा आग्रह छ ।
Posted on: 06 Oct, 2016
दंगाली चेली भुमिकाको कम्मरमा साडि लगाइदिने कोहि छ ? (भिडियो हेर्नुस्)
दङ्गाली चेली गहतराजको तीज कोशेली “मलाई बिगार्यो छोटो जामाले” बजारमा
“म त हजुर तुलसीपुरको झिल्के” मा दङ्गाली चेली लामिछानेको अभिनय